ओलीको राजीनामापछिको मधेस - ६ : त्यो जनकपुर, यो जनकपुर - Ratopati
भदौ ९ | एसके यादव
जनकपुर– पाँच महिनाअघिको जनकपुर र अहिलेको जनकपुरमा धेरै फरक छ । त्यसबेला जनकपुर आउँदा सडकमा जताततै टायर बलेको धूवा निस्किएको हुन्थ्यो । यहाँको आन्दोलनमा तीनजनाको ज्यान गएको छ भने सयाँै आन्दोलनकारी घाइते र अर्बौंको क्षति भएको छ । आक्रोश थियो । प्रतिशोधको भावना थियो ।
सटर बन्द । सडक र गल्लीमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति, ठाउँ–ठाउँमा नारा–जुलुस हुन्थ्यो तर अहिले जनकपुर पूरै शान्त छ । मानौं ५÷६ महिनाअघि केही भएको थिएन यहाँ । यसबारे प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘यो तुफानपछिको सन्नाटा हो । यस्तो सन्नटा हो, जुन कुनै बेला पनि विस्फोट हुन सक्छ ।’ उता मधेसवादी दलका नेतृत्वकर्ताले केन्द्रमा भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’ तर, यता त्यस्तो केही फेलापार्न सकिएन ।
रातोपाटीका टिम दुई दिन जनकपुरको गल्ली–गल्ली र चोक–चोक घुम्यो । तर, आन्दोलनका कुनै पनि गतिविधि तथा त्यसको अवशेष पनि कतै पाइएन । न राजनीतिक दलबाट न स्वतन्त्र निकायबाटै । सबै दल आ–आफ्नो संगठन निर्माणमा लागेका छन् । पार्टी प्रवेश गराउनुदेखि लिएर सदस्यता वितरणसम्मका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । मानौं, उनीहरुका लागि आन्दोलनको उपलब्धि त्यति नै हो । डा. लाभ भन्छन्, ‘आन्दोलन सुरू गरेदेखि हालसम्म मधेसवादी दल चुक्दै आएका छन्, आन्दोलन किन गर्नुपर्यो र किन अन्त्य भयो भनेर एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न नसक्ने दलहरु आगामी लडाइँ कसरी जित्न सक्छन् ।’
वेलकम होटलमा भेटिएका सद्भावना पार्टी धनुषा अध्यक्ष सञ्जय सिंहसँग यही जिज्ञासा राख्दा उनले आफूहरु शक्ति सञ्चयको कार्यमा लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘आन्दोलनसँग सम्बन्धित अहिले कुनै पनि कार्यक्रम भइरहेका छैन । यद्यपि, संगठनकै कार्यक्रममा हामीले आन्दोलनको पनि कुराकानी गरेका छौं, आन्दोलनका समीक्षा गरेका छौं, आन्दोलनमा सहभागितको कुरा गरेका छौं ।’
भदौ ८ देखि जिल्लाको विस्तारित बैठक हुने भएकाले त्यसकै तयारीमा केही दिनदेखि लागेको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘आन्दोलनप्रति मधेसी जनतामात्र होइन, हामी जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ता पनि निराश छौं, आन्दोलन किन सुरू भयो, किन अन्त्य भयो, आन्दोलनले के उपलब्धि दियोजस्तो प्रश्नको जवाफ दिन हामी सकिरहेका छैनांै ।’
एक समय जनकपुरमा निकै चर्चामा रहेका स्वतन्त्र युवाको संगठन ‘मास’ हराएको छ । आन्दोलनमा बल दिने, आन्दोलन गर्न ऊर्जा थप्ने काम सुरूदेखि गर्दै आएका ‘मास’लाई जनकपुरमा हामीले खोज्यौं । त्यसको पनि कुनै चहल–पहल तथा अवशेष कतै फेला पार्न सकिएन, जब कि उनीहरु दिनदिनै केही न केही गरिरहन्थ्यो । मासका संयोजक सरोज मिश्रालाई रमानन्दचोकस्थित उनकै मोबाइल पसलमा भेटायौं । उनले भने, ‘राजनीतिक दलका गतिविधिका कारण हाम्रो पनि केही गतिविधि छैन ।’
उनले पनि मधेसवादी दलका जस्तै संगठन विस्तारका कुरा सुनाए । सप्तरी, महोत्तरी, रौतहटलगायतमा जिल्ला समिति गठन गरेको र अन्य जिल्लामा पनि गठन हुने सुनाए ।
‘जनकपुरका नेताहरुले एक/डेढ महिनाअघिसम्म केही न केही गरिरहन्थ्यो तर जबदेखि यो तीनबुँदे सम्झौता भयो र नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो बेलादेखि आन्दोलनको नामोनिशान रहेन,’ धनुषाका पत्रकार सुरेश यादवले भने, ‘तीनबुँदे सम्झौताप्रतिको विरोध हो कि सन्तुष्टि हो बुझ्न सकिएको छैन तर जुन बेलादेखि तीनबुँदे सहमति भयो, त्यो बेलादेखि आन्दोलन शान्त भएको छ ।’
मासका संयोजक मिश्राले आन्दोलनको अवस्थाबारे प्रतिशतमै हिसाब गरेर सुनाए । उनले भने, ‘३० प्रतिशत जनतामात्र खुला दिलले आन्दोलन गर्न चाहेका छन्, आन्दोलनपीडित ३० प्रतिशत जनताले आन्दोलन नहोस् भन्ने चाहन्छन् भने १५ प्रतिशत जो काँग्रेस, माओवादी र एमालेका छन् उनीहरुले कहिल्यै पनि आन्दोलन नहोस् भनिरहेका छन् । ३० प्रतिशतमा संघ, संगठन तथा स्कुल, क्याम्पस पर्छन्, जो अन्योलमा छन् । अब के हुन्छ भनेर सोचेर बसेका छन् । अर्थात् ६० प्रतिशत जनता निराश छन् भने ४० प्रतिशत जनता आन्दोलनको पक्षमा छन् ।’
तर, अर्का पत्रकार एवम् सामाजिक अभियन्ता रामआशिष यादवको सोच अलि फरक छ । उनी भन्छन्, ‘निराश हुने अवस्था अझै पनि छैन । यसप्रकारको आन्दोलनमा यस्तो हुन्छ । आन्दोलन जहिले पनि एकैखालको हुँदैन, उतार–चढाव हुन्छ । यसको मतलब आन्दोलन नै समाप्त भयो भने होइन ।’ आन्दोलन नेता वा व्यक्तिले गर्न सक्छ भने होइन, जोकोहीले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने उनले बताए ।
यद्यपि, अहिलेका मधेसवादी दल अन्योलमा रहेको उनले स्वीकारे । मधेसी जनताले त आन्दोलन गरे तर त्यसलाई दिशा दिने मधेसवादी दलबाट हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । विभिन्न सामाजिक आन्दोलनमा पनि सहभागी हुँदै आएका मास संयोजक मिश्राले पनि भने, ‘अब आन्दोलन उठे पनि राजनीतिक दलको भरमा उठ्दैन ।’
गठबन्धन र मोर्चा
केन्द्रमा रहेको संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको द्वन्द्वको असर जिल्लामा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । केन्द्रमा त कहिलेकाहीं बैठक र छलफल पनि हुन्छ तर जिल्लामा त्यस्तो केही छैन । प्रत्येक जिल्लामा मोर्चा र गठबन्धनमा विभाजन छ । माघयता जनकपुरमा न मोर्चाको बैठक बसेको छ न गठबन्धनकै । यसबारे सद्भावना पार्टी जिल्ला अध्यक्ष सिंहसँग जिज्ञासा राख्दा उनले ‘सबैजना बस्न नपाए पनि एक÷दुई, एक÷दुई दल गरी कहिलेकाहीं कुराकानी हुने गरेको’ प्रतिक्रिया दिए । यस्तो किन त सोध्दा उनले माथिको क्रियाकलाप भनी छोटो प्रतिक्रिया दिए ।
प्राध्यापक डा. लाभले भने, ‘मधेसी जनताले जति–जति उनीहरुलाई मिलुन् भन्छन्, त्यति–त्यति उनीहरु विभाजित हुँदै आएका छन् । मधेस आन्दोलनका लागि यो दुर्भाग्य हो ।’ मोर्चा र गठबन्धन नामको मात्र हो, भन्दै डा. लाभले मोर्चा र गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आ–आफ्नै तरिकाले कार्यक्रम गरेको, आ–आफ्नै तरिकाले अभिव्यक्ति दिने गरेको कारणले यस्तो अवस्था देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘एक त सुरूमै संघीय गठबन्धन बनाउनुपथ्र्यो, अन्तिममा आएर बनाए पनि अन्तरद्वन्द्व सुरू भएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर मधेस आन्दोलनमा परेको छ ।’
मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा खतरनाक अवस्था जातीय संगठनले गर्दा देखिएको टिप्पणी पनि जनकपुरमा सुनियो । मधेस आन्दोलन सुरू भएको एक महिना नपुग्दै जातीय संगठनको नाममा विभिन्न जुलुस निस्कन थाल्यो ।
तेली, कुशवाह, यादव, ब्राह्मण र कायस्थ समाजलगायत यस्ता दर्जनौं जातीय समाज आ–आफ्नो ब्यानरसाथ जुलुसमा सहभागी भएका थिए ।
डा. लाभले भने, ‘जातीय संगठनका नाममा निस्केका जुलुसलाई मधेसवादी दलमध्येका नेताहरुले आ–आफ्नो जातीय र वर्गीय रुपमा त्यसलाई संरक्षण दिए । आज त्यसले यस्तो रुप लिए कि त्यसलाई सम्हाल्न मुस्किल भएको छ ।’ पत्रकार रामआशिष यादवले पनि मधेसमा जातीय राजनीतिकले यस्तो रुप लिँदै छ । भोलि गएर त्यसलाई सम्हाल्न निकै गाह्रो हुने बताए । अहिले यहाँ जुनसुकै कार्य तथा गतिविधिलाई जातीय नाम वा नारा दिएर बदनाम गराउने गरेको छ । यसको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक दलमाथि जाने उनले बताए ।